I-Othello enomhawu ngokusobala ayiyona indaba kaJoseph Prigogine. Ngokungafani nabayeni abathanda ukujabulela ubuhle bamakhosikazi abo, umkhiqizi othandwayo uthanda ukumhlonipha obala umkakhe, ukushicilela izindaba zakamuva mayelana nomculi ku-microblogging yakhe.
Izinsuku ezimbalwa ezedlule ekhasini elingu-Instagram likaJoseph Prigozhin isithombe esingavamile saseValeria sasivela esikhwameni sokuvula. Naphezu kwesimo sakhe esihle, umculi, ngokungafani nabanye osebenza nabo, akasheshi ukuzihlukanisa nabalandeli. Mhlawumbe, ngenxa yalesi sizathu, abanye abahlaziyi babheka ukuthi isithombe senziwa ku-Photoshop - umzimba wenkanyezi ubukeka uphelele kakhulu.
Kunzima ukukholelwa ukuthi umculi usevele eneminyaka engu-47 ubudala, futhi unina wabantwana abathathu abadala. I-Prigogine ekukhulumeni esithombeni inxusa abesifazane abanesikhalazo ukuthatha isibonelo kumkayo:
Owesifazane omkhulu, abesifazane abathandekayo, okuncane kubo ..., uhle futhi u-@valeriya_rus wami ulungele ukufakazela ukuthi isiqiniseko esiyinhloko sokuphumelela ukubukeka indlela yokuphila enempilo, ukudla okunempilo nokuzivocavoca okufanele. Ngiyaziqhenya futhi ngiyamthanda.
Lokhu okuthunyelwe kuqoqwe ukuphawula okunamandla ekhelini lomculi. Abanye ababhalisile bathi u-Prigozhin wayenenhlanhla enomfazi onjalo, kodwa naye ngokwakhe, ngeke avinjelwe ukwenza isibalo sakhe siqu.
Isithombe nguBoris Nemtsov senze iphutha lezombangazwe ku-Instagram yenkosikazi yakhe
UVavel Priluchny utshele ngamalungiselelo okudubula uchungechunge oluthi "Major-3", ividiyo
Imilenze ka Xenia Borodina ihleka usulu abasebenzisi be-intanethi, isithombe
UKarina Razumovskaya wathola imibuzo mayelana "Nomkhulu-3"
ULolita ema-overalls avulekile waba inkanyezi ye-Inthanethi
Imishini ye-physiology, ukwelashwa okubandayo
Yikuphi ukudla okungenakuhlanganiswa ekudleni?
I-English mint sauce
Ikhekhe lama-apricot nge-cottage shizi
Ngingazibona kanjani izinkinga ngenhliziyo yami ngokuhamba kwesikhathi?
Izici zokudla kwesilisa: indlela yokulahlekelwa isisindo ngokushesha kummeli wesilisa
Ingane Yobumnyama: Indlela yokwenza izingubo ze-vampire ze-Halloween ngezandla zakho